Mayor agwa ukwuu nke XCMG Brazil onyinye na Chinese-Brazil Cooperation na Sustainable Development - China Xuzhou Fenghe Intelligent
FH Ngwa History
Farm Jikọtara mejuputa
Efe n'elu-arụ ọrụ Equipment
Ngwa / mapụtara Parts
Con struction Machinery Parts
Track / Chassis Assembly
Slewing Drive / Ibenata mmasi Box
Gear / Gear aro
Slewing agba / Slewing Ring
Ngwa & mapụtara Parts
Mayor agwa ukwuu nke XCMG Brazil onyinye na Chinese-Brazil Cooperation na Sustainable Development
A Omume na Udo Brazil Town Basking na Soft Sunshine on a Winter n'ehihie
On August 11 na Brazil (obodo oge), Mr. Zhou Tiegen, Mayor of Xuzhou, na ya bịa, mere ihe na-na saịtị nnyocha XCMG Brazil Base, n'ikwusara ndị na-elekọta na ekele nile ọrụ ebe a si Party Committee na Government azụ n'ụlọ. Mgbe na-ekwu okwu nke ukwuu nke Base rụzuru na n'oge gara aga afọ, ọ na-kwuru na ya agụsi olileanya na XCMG Brazil Base ga-eme ka n'ihu mgbalị ibu a nlereanya na-akwalite Chinese-Brazil imekọ ihe ọnụ na-adigide mmepe.
Mayor Zhou Tiegen na Party nabatakwara si XCMG Staff na Brazil Base.
A snapshot nke Mayor Zhou n'ikwe n'aka, okwu na N'ime maka Pictures, na Staff.
The ndú ụlọ ọrụ nke Mr. Zhou n'oge nnyocha gụnyere: Zhao Xingyou, Vice Mayor of Xuzhou; Tang Jian, Mayor of Pizhou City; Lu Chuan, President of ígwè na Deputy Party Secretary nke XCMG; Wang Yansong, Vice President of Machinery & onyeisi oche nke XCMG Brazil Base; na Cui Jisheng, General Manager nke XCMG Brazil Base.
Mayor Zhou Tiegen na-nyochasịkwara a Onodi na XCMG Brazil Base
Mayor Zhou mere zuru ezu ase n'ime mmepụta ọnọdụ na ogbako, akpan akpan, arụmọrụ, usọ, orunótu na na. Mgbe a nyere a nkenke okwu nkowa, o akp ya ​​zuru ude nke mmepụta na ọhụrụ ike nke XCMG, na jara mkpara nkà na orunótu larịị na XCMG Brazil Base.
Douglas, Brazil Director na Technology Department, Briefed Mayor Zhou on Works na ya Department.
Mayor Zhou ume mba ọzọ na-arụ ọrụ na Base ịrụsi ọrụ ike, na-eme ihe onyinye XCMG na ha hà n'ezie omume, na o kwuru na ya-nnọọ ka ha nleta, ọmụmụ na mgbanwe na Xuzhou na-eme n'ọdịnihu.
Mayor Zhou na-Ịga Debriefing Oge Site Cui Jisheng, General Manager nke XCMG Brazil Base
Lu Chuan, President of XCMG, na-akọ banyere N'ozuzu Business Ọnọdụ ka Mayor Zhou
Na-ekwu okwu ná nzukọ, Mr. Lu chịkọtara n'ozuzu ọrụ na-arụpụta na Brazil Base n'elu akpa ọkara nke 2017 na asaa akụkụ: Asset efficiencies (ego & uru, penetration udu, mmepụta efficiencies, akaụntụ nnabata na inventories), Product quality, Sales & ahịa, Obodo talent development & ụlọọrụ omenala ụlọ, n'ikedo na iwu na ụkpụrụ & mastery na ngwa nke preferential atumatu, na Improvement na elu-ọgwụgwụ ikpo okwu maka obodo sales na mba na-ebupụ, kọọrọ ndị Mayor na ya ọzọ na ọganihu ke ọbọ XCMG si bịa mgbaru ọsọ nke 5-2-2-2 (5 growths, 2 Mmeli mma, 2 Njikwa na 2 ọwọrọde) enịm na mmalite nke afọ - by now, na Brazil Base ka were were kụrụ ọtụtụ ndị zaa n'elu akpa ọkara nke afọ, ma nye a ngwa ngwa okwu nkowa na ọhụrụ tolite na dịgasị iche iche, dị ka bughi ukpụhọde, nzukọ njikarịcha, atọ omenala edemede nke isi igwe, ise ọhụrụ-la unched arụmọrụ, obodo na esenidụt ahịa, ulo oru Ọdịdị, ngwaahịa assortments, nụchara anụcha management na akpan owo oke njikarịcha.
Mgbe ahụ, Mr. Lu wee na mba ọrụ na Brazil Base, na-akọwa na mba arụmọrụ ga-wuru na nụchara anụcha na metụtara nanị akụkụ ụfọdụ arụmọrụ, ya bụ, anyị ga-elekwasị anya naanị na elu arụmọrụ, elu àgwà, ala-akwụ ụgwọ na ala umu anwuru , nye elu mkpa ka orunótu: iji nweta na azụlite obodo talent, na n'otu oge ahụ, na-enye ego ego na fundraising nyiwe a òkè ka ukwuu na-egwu. Na njedebe, o kwuru na mba ọrụ na Brazil Base kwesịrị ihe niile na-yana idobe okirikiri internationalization mbanye, na-eme ihe kasị mma nke ọ bụghị nanị na abụọ Traditional Rates - ọnụego ahịa penetration na ọnụego nke uru, ma na-abụọ New Rates - ọnụego mgbanwe na tax ọnụego.
Mayor Zhou Debriefed Lu Chuan na N'ozuzu Performance na Base, na Tọrọ si Ọrụ chọrọ na Nzute
Mgbe debriefing, Mayor Zhou kwuru na ya ụtọ na rụzuru na XCMG Brazil Base mere, na kwuru, sị: mbụ, dị ka a Chinese na a ibe si Xuzhou - obodo nke XCMG, m nnọọ mpako nke XCMG Brazil Base. Mụrụ ya kwa se bụ ịrịba ịrịba ama XCMG bụ n'ụzọ ka mba ahịa na ụwa ogbo. Nke abuo, m nnọọ ụtọ na XCMG Brazil Base si na-eto, ya olile anya, ya dọọ aka ná ntị management, ya na-amụba mmepụta ikike, ya siri ike àgwà akara na ya na-amụba ahịa òkè. All ndị a na-ekwe nkwa a mma mmalite nke ya n'ihu mmepe na-eme n'ọdịnihu. Thirdly, m dịkwa nnọọ ụtọ na aspiring mmụọ nke mkpara na XCMG Brazil Base, gụnyere ma Chinese na mba ọzọ ọrụ, karịsịa isi nlekọta na oru pesonel. Nke a upbeat, uchu mindset bụ ihe ịrịba ama nke ha obi ike na ya mmepe, a ihe ịrịba ama nke ha nkwa na nzukọ, na-a ịrịba ama nke ya na-asụ ụzọ ụlọọrụ omenala na ike cohesive ike. Nke a mindset, m na-eche, na-amụkwasị ìhè na ezigbo potentials maka XCMG Brazil Base.
Mayor Zhou mesikwara atọ ntụziaka nke XCMG ga asọ n'ihu na-eme n'ọdịnihu: Akpa, XCMG ga-achọ mgbe nile na ịchọpụta ihe ndị kasị elu na ọnwụ onu teknụzụ na-ewu ígwè ụlọ ọrụ iji na-azụ na-eme ka mmepe nke dum XCMG site na nkà na ụzụ innovations. Nke abụọ, XCMG kwesịrị jiri isi obodo ahịa ego ya mergers, mbụ na restructurings, na-achọ iputa ibu siri ike mgbe eje n'okporo ụzọ na-a ụwa-klas zuru ụwa ọnụ ibu. Nke atọ, XCMG kwesịrị ime ka ndị ọzọ mgbalị rụọ ọrụ ya, oha Ọdịdị na ime ya oha ike, nke bụ ntọala maka ya n'ihu mmepe.
Na-aga n'ihu, Mayor Zhou gbara ndị Brazil Base aka anọ iche iche nke mmata: Nke mbụ bụ ike ọhụrụ mmata. Ka na-amalite amalite, XCMG Brazil Base ga itinye mkpa na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ talent. Ọ ga-adọta na-ejigide obodo talent na Brazil. Naanị ihe enterprise na ike talent nwere ike Wapụtara a emeri foothold na mba Arenas. Ya mere, talent bụ nke usoro pụtara na ogologo oge mmepe. Nke abụọ bụ iji mee ka ndị ahịa mata, ya bụ, XCMG ga-anwa anwa n'ofè ya Brazil wusiri ike n'ime South America, ngwa ngwa inweta ya ahịa òkè n'ofe mpaghara. The atọ bụ iji ike management mmata. N'ịbụ a ọhụrụ-mụrụ enterprise, na Brazil Base igbaso oge a mba management ụkpụrụ na mma omume guzosie ike na ijikwa ya òtù. Ọ ga-eme ka obi ike ọnwụnwa na ọhụrụ ụdị, ọhụrụ ụzọ na mma omume, na-ahapụ ọtụtụ management ụdịdị na ekwesighi omume na omenala n'ichepụta ụlọ ọrụ. Ọ ga-akwalite mba na obodo azụmahịa ụdị, na nnwale na usoro ọhụrụ management. Nke ikpeazụ bụ na-ewusi ndị mmadụ na-agba mbọ mata na-akwalite ndị mmadụ na-agba mbọ management ụdịdị. Iji mezuo nke a, XCMG kwesịrị, nke mbụ niile, uru na-eche banyere ọrụ ya, na-enye ya ọrụ na-achọsi ike na-arụ ọrụ na-ebi gburugburu na mma ụgwọ ọnwa; ọ ga na-amụ ma na-ekwenyere obodo iwu ya, na-enye obodo talent a òkè ka ukwuu na-egwu, na-enyere Brazil ọrụ na-aghọta na ha onwe onye ụkpụrụ na ọganihu ha ọrụ mmepe dị ka ume na-amụba. Naanị mgbe ị na-eme ya otú a, ị pụrụ ịkwagide azụmahịa gị mmepe na-eme ka gị enterprise Evergreen. Olileanya m bụ na XCMG Brazil Base nwere ike na-enwe ike-enwe mmetụta dị ka a nlereanya nke Chinese-Brazil mmekorita na a posta nwa adigide azụmahịa mmepe.
Mayor Zhou na ya ọzọ, Bilie Vice President of XCMG Machinery Wang Yansong, zutere na Mr. Ivan, Director nke kwụsị 'Office, na Mr. Paulo, Foreign Affairs Officer nke Presidential Obí, na Brasília maka na-omimi ntụle n'ihu imekọ ihe ọnụ. Na nnọchite nke President, Mr. Paulo jara XCMG si eme ka Brazil na ya nlereanya ọrụ, na akp ya ​​ji ezi obi ekele na gbara ọkpụrụkpụ XCMG mere na a lackluster ụlọ ọrụ odida obodo.
Ke akpatre ụkwụ nke njem na otu ụbọchị, Mayor Zhou na ya ọzọ na-akwụ ụgwọ ihe ukara nleta Mr. Li Jinzhang, na Chinese nnochite anya na Brazil. Mr. Li rattled anya a ogologo ndepụta XCMG Brazil Base bụ isi na rụzuru, na kwuru na afọ ojuju na XCMG si eme ka Brazil development gburugburu na-aga n'ihu downturns na ya na-adịbeghị anya nke ọma na ọdịda a eriri nke blockbuster iwu. Ke adianade do, Mr. Li nwekwara ukwuu ghọtara Party nzukọ ụlọ mgbalị XCMG Brazil Base ka ukwuu kwekọọ na Central Committee nke Party azụ n'ụlọ.
Send gị ozi anyị:
* Captcha: Biko họrọ Key
Post oge: Aug-28-2017
The-echebe Mmadụ na Road Initiative-egosi na S ...
Mgbe atọ afọ mmepe, na-echebe na Road agbanweela si China si ụzọ mba otutu mmadu kwenyere, na-enweta a nọmba nke dị mkpa rụzuru. Ka ọ dịgodị, daashi nke-echebe Mmadụ na Road Initiat ...
XCMG wheel loaders arụ ọrụ na kefriza-co ...
Arctic region, Russia - August 16, 2017 - Na kasị open-n'olulu m nke Russia, na loaders na ndị kasị ibu tonnage na China - XCMG LW1200K na abụọ wheeled bulldozers XCMG DL900A na-arụ ọrụ ruo ihe karịrị 20,00 ...
660T, XCMG Kasị Ukwuu-tonnage kwụ D ...
XCMG kasị ukwuu-tonnage kwụ directional egwu nnọọ e exported ka India n'oge na-adịbeghị, na ụlọ ọrụ si XZ6600 kwụ directional mkpọpu ala, featuring kacha ike 6600KN, ga-tinye n'ọrụ na Natura ...
XCMG ebupụ ya Road Machines na batches ...
Na ike nke ya siri ike na nkà na ụzụ kpọkwara, zuru okè mgbe-sales ọrụ na elu na-eri arụmọrụ nke ngwaahịa, XCMG kpochapụ osisi na a na-adịbeghị anya mba ikele maka integrated osisi Kenya. Ugbu a, 19 ad ...